PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2018-12-30 - Kumenele owadubuleka belwa noPhuzekhemisi
Kumenele owadubuleka belwa noPhuzekhemisi
Isolezwe ngeSonto - 2018-12-30 - IZINDABA - FANELESIBONGE BENGU NOKHETHA SANGWENI
KUGCINE kumenele umlisa owadubuleka ngesikhathi kunengxabano phakathi kwakhe nenkakha kamasikandi empini okuthiwa yasuka kubangwa imali okwakufanele ikhokhelwe umufi.
UMnuz Morning Selby
Shezi (48) ushonele esibhedlela esisePort Sheptone ngoLwesine. Umufi ubesebenza ebhendini kaPhuzekhemisi ehamba naye izindawo uma eyocula.
Leli phephandaba liye kohlanganisa amehlo nomndeni kamufi eMgababa nalapho lifice khona kuwusizi nomunyu emndenini.
Umnewabo kamufi, uMnuz Sibusiso Shezi, uthe umfowabo ushone esethembisa ukwelulama ngoba ubesekhuluma. “Ubesephumile nasegunjini labagula kakhulu esekwelejwayelekile. Bese sinethemba lokuthi usezophila. Kube buhlungu ukushona kwakhe ngoba bese silinde ukuthi alulame kahle bese eyaphuma abuyele ekhaya.”
Uveze ukuthi inkinga yokuphefumula yiyona egcine ijuqe umufi.
Umufi kuthiwa waxabana noPhuzekhemisi bagcina belwa babanga nesibhamu ngasekuqaleni kwenyanga, kwagcina ngokuthi umufi adubuleke ngezinhlamvu ezine waphuthunyiswa esibhedlela esesimeni esibi.
Ngokwamaphepha asenkantolo, uPhuzekhemisi noShezi bebeseLovu, lo mculi wamshaya ngesidunu sesibhamu wabe esemdubula esifubeni nasesiswini. Babehamba ndawonye emotweni nomshayeli sebeya esitolo ngemuva kokuzitika ngamanzi amponjwana.
Isigameko sokudubuleka kukamufi saholela ekuboshweni kukaPhuzekhemisi ongumakadebona kwezomculo wagcina ethole ibheyili kaR3 000. Naye uPhuzekhemisi wahuzulwa yinhlamvu esiphongweni kulesi sigameko. Ukushona kukaShezi kungase kujike icala abhekene nalo uPhuzekhemisi lisuka kwelokuzama ukubulala, kube elokubulala.
Icala bekulindeleke ukuthi libuyele eNkantolo yeMantshi eThekwini ngoFebhuwari 15 kulo nyaka ozoqala. Umufi ushiya emhlabeni amadodakazi akhe amabili uNomonde noNombuso.
ZIYAQONGA izinkinga zenkakha yomculi kamaskandi uPhuzekhemisi njengoba sekushone umlisa owadubuleka bexabana uMnuz Selby Shezi Isithombe : FACEBOOK/PHUZEKHEMISI